Une maebook mangani pane eReader yako? | MaReaders ese
Une maEbook mangani paReader yako?
Zhizha rinouya uye naro rakanaka mamiriro ekunze uye zororo. Nguva apo vanhu vazhinji vanotora mukana kurodha maBooks avo eBook uye kuverenga chero nguva, asi Maebook mangani aripo? Ivo vakawanda here kana kuti vashoma?
Mumwedzi ichangopfuura munhu wese akatarisa pasimba reReader, skrini yayo kana bhatiri rayo asi Uye munzvimbo yako? Pane chero munhu akacherekedza yako yekuchengetedza? Pane chero munhu anoverenga ma ebook anokwanisa kuiswa muReader?Chokwadi ndechekuti zvinoita sekunge makambani chete ane hanya nazvo uye chete kuchengetedza mazana mashoma emadhora. Makore apfuura zvaitaridza kuti vese maReaders vaizove nekadhi kadhi yekuzivisa ma ebook akawanda atinoda, asi maitiro azvino ndobvisa izvi nekusiya iyo yemukati nzvimbo iyo mune dzakawanda kesi isingasvike 4 Gb uye zvakadaro hapana munhu anonyunyuta.
Iyo yekumukati ndangariro yemabooks iri kuderera uye kudiki, kunyange ichitsigira zviuru zveebook
Zviri pachena kuti kuSpain, nedambudziko, svashoma vashandisi vane mazana nemazana ebook, chimwe chinhu chine musoro, asi kunze kwemiganhu yedu, vashoma vashoma vanozvitaura. Ichokwadi kuti kumwe kushinga kwakapinza "zviuru" zveebook muMhando yake uye semhedzisiro iyo eReader yaita zvakanyanya kana zvakadaro iye anodaro.
Ini pachangu ndinofunga kuti kuchengetedza kwanga kusiri dambudziko nekuda kwesd makadhi, asi ikozvino maReaders havana slot iyoyo, angangoita mazhinji, saka zvinoita sekunge tichafanirwa kujairira kuve nemaebook mashoma kana zvisingaremi ebook, inonakidza pfungwa iyo vanhu vashoma vanoteerera asi ini ndinofunga ndiyo kiyi kune zvese, haufunge?
Asi ikozvino ndinopfuudza bhora kwauri Une maebook mangani mumaReaders ako? Iwe unodzima ma ebook kubva kumuverengi wako paunoverenga? Wakambozadza ndangariro dzemukati yechinhu chako here? Iwe unofunga kuti eReader inowedzera kana ichizadza? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Software » eBooks » Une maEbook mangani paReader yako?
Ndine makumi mana nemashanu ebook pamoto wangu. Ndinoshuva dai ndaigona kutora akawanda asi kana ndikasaita zviri zviviri zvikonzero:
1- Iyo Kindle inoderedza zvishoma mamwe mabhuku aunazvo. Ini ndinofunga zviri nekuda kwenzvimbo yekuchengetera muverengi. Ini ndaizoda kuti ishande senge memory yeUSB uye inobvumira maforodha kuti aiswe mukufunga kwemushandisi sezvinoita Papyre (kana kuita). Iyo yekuunganidza indexing nzira iri kurangarira kwazvo ichidya akawanda mabhuku andinayo… ndinofunga. Kana ndiri kukanganisa, ndiudze.
2- Ini handidi kuvhiringidzika kana ndaverenga bhuku. Inenge iri hoot kana iyo Kindle ichibvumidza kumaka bhuku sekuverengwa nekuriisa padivi kufolda kana kuunganidzwa kunodaidzwa kunzi: "verenga." Chinhu chimwe chete chekuvandudza mune ramangwana.
Mhoro! Ndine mabhuku mazana masere nemakumi mashanu pane yangu kindle 850 uye zvinongodzora kana ini ndichiisa mabhuku ese sekumanikidza kwawo, asi zvino zvinoshanda zvakanaka. Ndakaverenga avhareji yemabhuku makumi mashanu pagore saka ndine chinguva! Ha ha
Ndine mabhuku angangoita mazana masere, asi kune iyo kindle ini ndinongopfuudza izvo zvandiri kuverenga uye zvimwezve, pakati pegumi kusvika makumi maviri emabhuku, mamwe ese andinotarisira neane caliber, kana ndikatenga muverengi asina kumbogadziriswa munzvimbo yekuchengetera, zvinoita zvisina basa
kunyengera kwegeek akadaro
Ndine angangoita 1000 pamoto wangu. Pakutanga ndakavaisa mukati pakarepo, uye ipapo ndakazoona kudzikira. Mamwe anofanira kunge akaiswa indexed zvisirizvo. Kana iwe ukavawedzera iwo zvishoma nezvishoma, zvinoshanda mushe zvisinei nekuti vangani vaunoisa kusvika kune imwe huwandu.Kutanga pa1200 kana zvakadaro, ini ndanga ndichitanga kudzikira zvishoma, asi hapana chakakomba.
Kupindura zvinyengeri zvegeek
Daniel Carreras Lana akadaro
Zvinoitika kwandiri senge mp3s, ini handidi kuve nezvakawanda zvekuunganidzwa kwemimhanzi kana mabhuku andisingazoshandise. Saka ndanga ndichiita zvishoma zvekutenga. Ndingaite zvinopfuura mabhuku asiri mu ebook !!!, ayo andinoda kubvunza zviri nyore munzira yepasi kana mumugwagwa neangu iPad kana iPhone, sezvo ini ndichichengeta epubs mu dropbox kana mega; chimwe chinhu kwandiri chakadzorawo kushandiswa kwema ebook (ayo akavharwa pamapuratifomu avo). Pamwe rimwe zuva pachave nerusununguko rweizvi pamwe neyakajairwa fomati ...
Pindura kuna Daniel Carreras Lana
Ini ikozvino ndine makumi matatu nematatu, ayo andiri kuverenga 35, kana ndapedza rimwe, rinoitika zvakanyanya kana kushoma pasvondo, ndinoridzima.
Pindura kune ajnaroundtheworld
Juan Sebastian Quintero Santacruz akadaro
Ndine ma ebook angu ese paPC yangu, kwandinoaita kuburikidza neCaliber. Pane chishandiso ndichave nemakatenderedza 30-40 ebook pasina dambudziko. Izvo zvandiri kuverenga ndiri kuzvibvisa uye pandinoda kuwedzera zvemukati ndinoreva kuCaliber nePC, saka kazhinji handitore ndangariro zhinji.
Zvakare, Amazon gore masevhisi anokuchengetedza iwe nzvimbo.
Pindura Juan Sebastian Quintero Santacruz
Ndine angangoita masere gigs emabhuku paPC yangu, uye ndakafambisa mashoma kuhwendefa, asi ndine chimwe chinhu senge mazana maviri emabhuku andakaisa kuNook yangu. Iyo haina matambudziko, hainonoke, haina kuzadzwa, ini ndinovaronga pane masherufu uye mumafolda. Kana ini ndaida kuisa mamwe mabhuku (ndichine nzvimbo yakawanda yakasara mune anoverenga) ndakawedzera memory kadhi. Ini handisati ndamboishandisa, asi zviripo kungoitika.
Tolino Peji, Tolino's eReader nyowani yemagumo-magumo
Iwo matatu akanakisa maapplication ekuverenga manhamba edu